1.Mamoaka fofona tsy mahafinaritra amin'ny fanasan-damba maina an-trano !!
2.Manala ny bobongolo sy ny tain-drendrika amin'ny amponga fanasana lamba !! (Aorian'ny fampiasana 2-3 herinandro isan'andro)
3.Manala ny loto ao amin'ny fantson-drano !!
4. Azo ampiasaina mihoatra ny in-300 (herintaona eo ho eo).
5. Esory ny manezioma amin'ny harato aorian'ny in-300 ary ampiasao ao anaty zaridaina na vilany voninkazo, satria ilaina amin'ny fotosintesis izany, manome hery ny zavamaniry ny manezioma!
Fampiasana: ampiasaina ho vokatra fanampiny ho an'ny fanalefahana lamba, fanadiovana ary fanamorana ny fanasan-damba vita amin'ny landihazo, rongony ary kofehy sentetika.
Ny fantsom-pifandraisana hoof dia fitaovana fanariana tsy manam-paharoa noforonina miaraka amin'ny fananana manokana ho an'ny fampiharana amin'ny soavaly soavaly. Tsy toy ny fanariana orthopedika ao amin'ilay fantsom-pandrefesana hoof io fa misy atiny resin betsaka kokoa, izay mahazaka fanoherana ny fitafiana.
Ny fomba famonosana hoof casting ary ny fitaovana fametahana substrate dia manohana ny toerana tsy fahombiazan'ny hoof ary koa ny vokatry ny tsy fahombiazan'ny rindrina toy ny, ny tsipika fotsy, ny lelafo ary ny faladia manify.
Ny Crepe elastage bandage dia misy endrika malefaka, elastika avo ary fividianana rivotra madio, izay afaka manatsara ny fivezivezy ra ary misoroka ny fivontosan'ny rantsambatana.
1. Fitaovana: landihazo 80%; spandex 20%
2. lanja: g / ㎡: 60g, 65g, 75g, 80g, 85g, 90g, 105g
3. Clip: misy na misy withour clip, clip band elastika na clip misy vy
4. Size: halavany (ahinjitra): 4m, 4.5m, 5m
5. Sakany: 5m, 7.5m 10m, 15m, 20m
6. Fonosana blastika: fonosana tsirairay ao anaty cellophane
7. Fanamarihana: fampahafantarana manokana arak'izay tratra araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Ny fehin-kibo vita amin'ny tubular dia manana fahaiza-manao sy fampiharana azo antoka. Azo ampiasaina amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana izy ireo, miaraka amin'ny rafitry ny tamba-jotra sy ny fomba fiasa tsy manam-paharoa, mety ho akaiky ny vatan'ilay marary izy io.
• Mampiasà sakelika marobe: Ao amin'ny paody polisy vita amin'ny fehy vita am-polony, fehikibo gypsum, fehy fanampiana, fehy famatrarana ary fametahana plywood asie liner.
• Akanjo malefaka, ahazoana aina, fahamendrehana. Tsy misy fiovana aorinan'ny fanamafisana ny mari-pana
Mora ampiasaina, suction, tsara tarehy ary gen-erous, tsy misy fiatraikany amin'ny fiainana andavanandro.
Ity zana-kazo ity Mampiasà profil avo lenta avo lenta avo lenta, tsy harafesina velively, manosihosy ny fitrandrahana oksidasiana eo an-dàlam-pandrosoana.
Sponjy mamoaka axillary ary mandray tànana, avelao ny ahazoana aina kokoa, famolavolana manokana ny fantsona, manome enta-mavesatra tsara kokoa, fantsona misy fantson-tady hialana amin'ny fikorontanana vy mampihena ny fifandirana sy ny akon'ny feo.
Antiskid cushions fingotra, manome fahaizan'ny friksi-tany mety, etona vita amin'ny metaly Tibet anatiny, manamafy ny faharetany, afaka avo lenta, mety amin'ny haavony hafa.
Ny orthopedic Casting tape, tsy misy solvent, sariaka amin'ny tontolo iainana, mora ampiasaina, manasitrana haingana, mahomby amin'ny famolavolana, lanja maivana, hamafin'ny hazavana, tantera-drano tsara, madio sy madio, radiolucence taratra X-ray tsara: radiolucence taratra X tena tsara mahatonga azy io mety ny maka sary taratra X ary hijerena ny fanasitranana ny taolana raha tsy esorina ny fehy, na mila esorina ny plastera.